Doorka qurbajoogga Somaliland ka qaataan ku dhaqanka joogtaynta doorashooyinka guud ee dimuqraadiga ah, waxa ka mid ah in kumanaan aqoonyahan dhalinyaro, waayeel, rag iyo haweenba leh oo inta badan ka yimaada dalka UK, iyo dalalka kale ee galbeedka Europe, Woqooyiga Maraykanka,
Australia iyo meelo kaleba ka soo qaybgalaan qabsoomida doorasho kasta iyagoo gaar ahaan la shaqaynaya axsaabta qaranka ku tartamaysa oo ay badankoodu goob joogeyaal iyo
wakiillo uga noqdaan goobaha codbixinta, iyo/ama mutadawaciin hawlwadeeno noocyo kale u metela oo kala shaqeeya axsaabta ay kala taagersan yihiin hawsha ololaha doorashada mudada uu socdo, halka ay qaar kale u yimaadaan indha indhayn, iyo inay si madaxbanaan uga qaybgalaan qiimaynta qabsoomida doorashada iyo ololaha loogu jiro ee ka horreeyaba. Qurbajooggaasi waa muwaadiniin jecel dalkooda oo si mutadawacnimo ah oo ay jeebkooda iska maalgelinayaan uga soo dhoofa dalkooda wadamo fog fog dacallada adduunka.
Inkasta oo aanay toos noola soo wada xidhiidhin, xisbiyaduna aanay weli noo soo wada gudbin xogta goob joogayaasha qurbajoogga ah ee u yimi ama usoo socda doorashadan, hadana Hay’adda Qurbajoogga Somaliland ee Wasaaradda Arrimaha Debadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL waxa ay ku qiyaasaysaa inay qurbajoog ka badan 3,000 qof ka soo qaybgalayaan doorashada madaxweyne-nimada dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee qabsoomaysa 13-ka November, 2017, kuwaasoo u badan dad goob joogeyaal iyo hawlwadeeno kale u noqonaya xisbiyada, isla markaana ay ku jiraan kooxo badan oo iyagu si guud oo madaxbanaan goob joog uga noqon doonaa doorashada sidii aan hore uga barannay doorashooyinkii hore. Dallada Guud ee Jaalliyadaha Somaliland ee Europe (SSE) ayaa iyaduna ku hawlan dhiirrigelinta iyo abaabulka ka qaybgalka goob joogeyaasha qurbajoogga ah doorashadan.
Hadaba Hay’adda Qurbajoogga Somaliland waxa ay si sharaf iyo qadarin leh uga codsanaysaa dhammaan qurbajoogga Somaliland ee jecel inay ka soo qaybgalaan doorashadan ee si xisbi ah ama madaxbannaanba u imanaya dalka inay la soo xidhiidhaan oo na soo wargeliyaan imaatinkooda iyo haddii ay haatan joogaanba. Sidoo kale, waxa aannu jecellahay inaanu idinka caawinno gaar ahaan xagga isku xidhka ama xidhiidhka axsaabta qaran ee tartamaya haddii aad ka hor inta aanad iman u baahantahay xog iyo tilmaan la xidhiidha arrintaas. Muwaadin, fadlan noo soo buuxi foomka halkan ku lifaaqan Somaliland Diaspora Observers form - Elections 2017ma haddii aad timina, fadlan nagu soo booqo Xarunta Xafiiska Hay’adda Qurbajoogga ee dhex yaalla dhismaha Wasaaradda Arrimaha Debadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL. Ujeedada diwaangelintani kaliya waa inaan ogaanno xogta dadkeenna qurbajoogga ah ee ka soo qaybgalaya doorashada tusaale magaca qofka, jaalliyadda/dalka uu ka imanayo, Email-ka iyo weliba sifaha imaanshahaaga tusaale haddii aad Xisbi u imanayso ama aad si madaxbannaan uga soo qaybgalayso doorashada. Aad baannu ugu bogi lahaynd haddii aad wakhti u hurto inaad buuxiso buuxiso foomka halkan ku lifaaqan oo aad dib noogu soo dirto.
Waxa ay tani innaga caawinaysaa xagga isku xidhka iyo fududaynta adeegga aan u qabanaynno dadka qurbajoogga ah ee u dhashay dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Guulle ayaa mahad leh, gobanimana qaranka JSL baa leh
Waxa soo saaray qoraalkan (Published by) :
Xafiiska Xarunta Guud ee Hay’adda Qurbajoogga Somaliland
www.sldiaspora.org / www.slforeign.com